Abiye Ahmed oo amray in Tigreega lagu qaado weerarkii ugu waynaa - Tilmaan Media
Abiye Ahmed oo amray in Tigreega lagu qaado weerarkii ugu waynaa
Raysalwasaaraha Itoobiya Abiye Ahmed ayaa ciidamada dalkiisa amray inay weerar ku qaadaan caasimadda gobolka Tigreeka ee Mekelle, kadib markay dhamaatay mudadii loo qabtay in madaxda gobolkaas isugu soo dhiibaan ciidamada dowladda.
Abiye Ahmed ayaa bartiisa Facebook ku sheegay ” Ciidanku waxay haystaan amar ah in ay qaadaan weerarkii ugu dambeeyay ee hawlgalka millatari ee soo bilawday afartii bishaan Nofembar”. Ahmed ayaa ballan ku qaaday in ay magaalada Mekelle ka ilaalin doonaan burbur wayn oo soo gaara iyo ilaalinta dadka rayidka ah.
Raysalwasaaraha ayaa yiri ” Haddii kooxda dambiilaha ahi ee TPLF ay hubka iska dhigi lahaayeen, dagaalku wuxuu dhamaan lahaa iyadoon khassaare wayn dhicin”.Sidoo kale wuxuu dadka dagan magaalada Mekelle ugu yeeray in ay hubka dhigaan isagana fogaadaan goobaha millatari.
Waxaa larumaysan yahay in dagaalka kasocda gobolka Tigreega ay ku dhinteen kumanaan qof oo rayid ah, waxaana dalka Suudaan u barakacay dad gaaraya 42 kun oo qof.
Waxa jira baaqyo kala duwan oo ka imaanaya caalamka kuwaas oo labada dhinca ugu yeeray in khilaafka wadahadal lagu dhameeyo lagana baaqsado khassaaro lixaadle oo soo gaaro dadka rayidka ah.
Waxaa maalmihii lasoo dhaafay booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa wufuud kala duwan oo usocday in ay dhincayada ku qanciyaan wadahallo nabadeed.
Sarkaal ka tirsanaa Komandooska Maraykanka & CIA oo Soomaaliya lagu dilay
Musharaxiinta oo ka jawaabay dilkii uu ku baaqay Filish, sheegayna cidda qaadeysa mas’uuliyadda